Accueil > Gazetin'ny nosy > Politika : Izay mahazo ny betsimiteny no mpandresy
Politika : Izay mahazo ny betsimiteny no mpandresy
Amin’ny fanaovana politika manerana izao tontolo izao dia misy hery iray izay tsy mba fantatra loatra nefa matanjaka noho ny antoko politika. Tsy mba antoko politika izy io na fikambanana na koa vondron’olona miafina(mafia) ireny. Tsy mba fikambanana fivavahana na ara-drazana na koa aram-pihaviana ity tiana holazaina ity fa ny antsoina hoe “betsimiteny” na ny “majorité silencieuse”.
Miara miaiky ny mpandinika politika rehetra maneran-tany fa ity betsimiteny ity no fototry ny fahamafisanorina fampandrosoana sy ny politika amin’ny firenena iray.
Ka iza marina izany ity antsoina hoe betsimiteny ity?
Ny betsimiteny dia azo lazaina fa ireo olona mpanaraka ny raharaham-pirenena. Tsy mijery raha tsy ny fampandrosoana, mijery ny lafiny toe-karena, ny fiarahamonina ary ny raharaha politika. Ahitana olona manampahaizana maro koa ny betsimiteny, ka maro amin’izy ireny no tsy mihevitra raha tsy fikarohana ara-tsiansa sy fiarahamonina.
Tsy mba manangana fikambanana ny betsimiteny nefa mivondrona amin-kahalalahana ka manambara ny heviny amin’ny fotoana tokony ilaina izany.
Ny betsimiteny dia ahitana ireo olokendry sy ireo malalan-tsaina ihany koa. Na izany aza dia ahitana ireo sarambaben’ny kintana koa izy ireo ka hita ao avokoa ireo sokajin’olona ara-tsosialy isan-karazany.
Raha fitinina dia ireo rehetra voalaza ireo ity sokajiana hoe “majorité silencieuse” na betsimteny ity.
Rehefa ity sokajin’olona ity no taitra dia matetika mikorontana ny firenena iray. Tonga hatrany amin’ny fanoherana mavaivay ny fanjakana ny raharaha ka mazana dia rava ny fanjakana izay tsy eken’ny betsimiteny ireo.
Na inona na inona koa no fihetsikin’ny mpanao politika mpanohitra fanjakana raha toa ka tsy mahazaka ireo betsimiteny ireo izy ireo dia lany rora fotsiny eo sy mivovo toa ny amboa fotsiny fa tsy hahavita na inona na inona sy tsy hahahazo vahoaka velively.
Fanontaniana mipetraka amin’izao fotoana izao ny fahafantarana ny fijerin’ny betsimiteny ireto. Moa ve momba ny fanjakana ankehitriny izy ireo? Sa kosa mbola azon’izy ireo ekena ny zavamisy eto amin’ny firenenana izao? Ny azo antoka koa nefa dia tsy momba ny mpanohitra fanjakana koa izy ireo.
Samy tsy mbola hita taratra amin’ny fiainana andavan’andro ny fihetsikin’ny betsimiteny ireto. Hita koa fa tsy mahavoasarika azy ireo ny fihetsikin’ny mpanohitra ankehitriny matoa mbola tsy hita mirona any amin’ny fanoherana ny sokajin’olona ity.
Ny betsimiteny no herin’ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana. Izay mahazo ireo sokajin’olona ireo dia tsy maintsy mandresy. Matetika nefa dia manenina ny sokajin’olona ity noho ny safidiny hatramin’izay teto Madagasikara.
Ny betsimteny dia tsy mba tia fisehosehoana amin’ny fahitalavitra na amin’ny haino amanjery isan-karazany. Mangina, mijery, mandinika ary mamakafaka dia mivorivory sy misoko mangina toa ny ron-gisa ireny. Rehefa mipoitra nefa izy ireny dia atahorana fa mahasarika vahoaka.
Koa satria tsy misy ny fanadihadiana na ny “sondage” eto Madagasikara izay hahalalana ny eritreritry ny betsimiteny ity ka tsy azo atao ny miteniteny foana. Ny azo antoka dia hery lehibe noho ny antoko politika izy ity ka samia mandinika.